Dokotera manampahaizana momba ny fo miisa roa no miasa ao an-toerana. Iray na roa isan’andro amin’ireo no fantatra fa miditra hopitaly nefa mety tsy misy ihany koa indraindray. Antony maro no mahatonga ny aretim-po izay ilay fo mihitsy no misy aretina na misy tsy fetezana raha araka ny fanazavan’ny dokotera Rakotoarisoa Hery Lanto, cardiologue ao an-toerana. Mety ho vokatry ny sakafo be menaka izany. Misy ihany koa ny avy any am-bohoka mihitsy ankoatra ny fifohana sigara sy ny fisotroan-toaka be loatra, ny aretina hafa toy ny goitre, ny kolesteroly izay manentsika ny lalandra. Mety hiteraka aretim-po ihany koa ho an’ny ankizy ny aretin-tenda matetika sy ny nify simba tsy namboarina. Mahafaty ny aretim-po raha tsy voatsabo raha ny fanazavan’ity dokotera ity ihany. Misy ny fambara mampahafantatra izany toy ny faharerahan’ilay olona, sempotra izy, manaintaina ny tratrany sy ny lamosiny…. ka ny fanatonana mpitsabo ihany no hany vahaolana.